Caterpillar ukunqamula ithrekhi sokuzivivinya, ukunqanda abantu bangathathi ikamelo kanye nensika yokukhiqiza - China Tianjin Longtop Izimayini
Inkampani wawuthi ukuhlola izindlela zamasu kuzovumela ke ukugxila kulabo imikhiqizo kunabo ukukhula ezingaba khona. Caterpillar wanezela ukuthi inkampani futhi wabenza yayo ukuhlala ezibophezele amakhasimende ekhona futhi uyokusekela ikamelo kanye nensika ithrekhi sokuprakthiza labo mabutho okwamanje operation.
UDenise Johnson, umongameli iqembu nge umthwalo izimboni ezinsiza, wathi: "Lezi uhamba, okuyinto ihambisane ukuhlelwa kabusha Caterpillar 'oqhubekayo, izokwenza sikwazi ukugxila izinsiza ku lezo zindawo ibhizinisi loniketa eliphakeme, ukusimama komnotho kanye engcono eside uyabuya. "
Ikamelo kanye nensika imikhiqizo ezimayini ezingaphansi komhlaba kokubuyekezwa amasu okuhlanganisa izimayini okuqhubekayo, Element amadlambi, amalahle Haulage izinhlelo, abavukuzi highwall, ophahleni bolters, izimoto Umbuso indawo izimoto udizili. Ngenkathi ingaphansi kokubuyekezwa Caterpillar uzoyeka ukuthatha oda amasha.
Nokho ukukhiqizwa ithrekhi sokuzivivinya luzomiswa, futhi ayikho imiyalo emisha kuyothathwa.
Johnson waphawula: "Isicabucabu ihlala izibophezele olunzulu umkhiqizo ezimayini iphothifoliyo. Sikholelwa ngokuqinile izimayini kuyinto umkhakha eside okhangayo, futhi siyaqhubeka ukutshala ezibanzi imikhiqizo, kokubili ebusweni kuthi laba abangaphansi komhlaba. Thina sokukhomba ukutshalwa zethu ngaphakathi iphothifoliyo umkhiqizo ezimayini ukuba bagxile kulezo zindawo ephezulu inzuzo ezingaba khona. Ngesikhathi esifanayo, siqhubeka uphathe ngokusebenzisa isikhathi eside phansi-umjikelezo emlandweni wethu. Siyazi lezi zenzo okuqhubekayo ukuhlelwa kabusha akulula ku zabasebenzi bethu; Ngiyajabula sokuzinikezela sethimba lethu eziqhubekayo. "
Ngokuhlanganyela simemezelo, Caterpillar ulindele ukuthi benze izenzo ukunciphisa kubasebenzi e Houston, Pennsylvania, US, lapho ekamelweni futhi insika imikhiqizo ekhiqizwa. Yize inkampani uhlose ukudayisa ikamelo kanye nensika imikhiqizo, izophinda ukuhlola ezinye izinketho, kuhlanganise Ukuvalwa kungenzeka sikhungo Houston.
Inkampani wawuthi Imininingwane bangabasebenzi entengo kuze kufinyelele 155 izikhundla elihlobene ne ekamelweni bese insika ibhizinisi kulindeleke, nabanye ezenzeka ngokushesha. Lanezela ukuthi lezi zenzo eduze ngaphezulu qondanisa namazinga okutholakala kwemisebenzi zamanje ekupheleni-ezimakethe.
Ngo Denison, eTexas, lapho ithrekhi sokuzivivinya akhiqizwa, cishe 40 izikhundla kuyoqedwa ngenxa ophumayo ithrekhi sokuprakthiza nezinye luhlobo ukwakha kabusha.
Ngaphezu kwalezi uhamba, Caterpillar ngeke repurpose yayo Winston-Salem, North Carolina, indawo, transitioning ke kusuka yezimayini isikhungo wesitimela ekuqaleni ngasekupheleni kwalo nyaka. Operations isuke Ezikwenza Ungathuthuki Rail, a ngokuphelele enganyelwe Caterpillar osizayo.
Ngenxa yalokho, inkampani ngeke sokufaka kwakhiwa ezinye izingxenye esetshenziswa amaloli ezinkulu zezimayini kusukela luhlobo yayo Winston-Salem ukuba luhlobo akhona e Decatur, Illinois.
Caterpillar usehlela ukudala ukuhlukana igxile ekuthuthukiseni ucwaningo, zokuthuthukisa umkhiqizo kanye emisha amakhono. Inkampani uyomenzela olulodwa ucwaningo, ubuchwepheshe kanye nokuthuthukiswa komkhiqizo division ukuletha eliphezulu umkhiqizo kwamangqamuzana futhi uhlelo ukuhlanganiswa. Lolu shintsho yenhlangano siyasebenza kusukela ngoSepthemba 1.